Izinketho ezi-5 zokufuduka usuka kwiWindows XP uye kwiLinux | Kusuka kuLinux
IMicrosoft imemezele ukuthi izoyeka ukuhlinzeka ukwesekwa kweWindows XP ngo-Ephreli 4, okusho ukuthi ikhompyutha yakho ngeke ithole izibuyekezo zesoftware zakamuva, kufaka phakathi izibuyekezo zokuphepha. Lokho kungashiya ikhompyutha yakho isengozini yamagciwane ne-malware, ngisho nangaphezu kwalokho esekuvele kuyikho. Uma kwenzeka usebenzisa ikhophi eligwaziwe, mhlawumbe awunandaba nokwesekwa okusemthethweni kweMicrosoft, kepha akumele ukhohlwe ukuthi udalulwe kangakanani lapho usebenzisa uhlelo oselucatshangelwe, noma yiMicrosoft uqobo, njengolungasasebenzi.
Kuleli qophelo, izindlela okufanele zilandelwe yilezi:
Qhubeka ngeWindows XP bese ubhekana nemiphumela,
Thuthukela ku-Windows 7 noma iWindows 8, okusho ukuthi kufanele ukhokhe inani elihle lemifino (kungabalwa i-antivirus namahhovisi amasudi),
Thuthela ku-GNU / Linux futhi ujabulele imali elondoloziwe.
0.1 Kungani ukhetha i-GNU / Linux?
1 Yikuphi ukusabalalisa okuncomayo?
1.1 1.Linux Mint
1.2 2. ULubuntu
1.3 I-3. I-Zorin OS
1.4 I-4. I-OS Elementary
1.5 I-5. Ubuntu
Kungani ukhetha i-GNU / Linux?
Yebo, kuze kube manje incazelo yenkinga. IWindows XP isendleleni yokuqothulwa, futhi kukhona okudinga ukwenziwa. Kepha, ngokwazi iqiniso iningi lethu eliqala kulo, umbuzo ungavela kuwe: "Futhi kungani usebenzisa i-GNU / Linux uma ngikwazi ukulanda i-pirated Windows 7 noma i-8?" Awu, bangane, uma kunjalo ngiphakamisa ukuthi nifunde lokhu omunye okuthunyelwe lapho izinzuzo ze-GNU / Linux zifingqiwe, ezingafingqwa ngokulandelayo:
kungaphezulu ephephile- Cishe awekho amagciwane noma i-malware engathinta i-GNU / Linux
kungaphezulu uzinzile- Ukuphahlazeka akuvamile kakhulu kwi-GNU / Linux futhi kuhlale kunezindlela zokubhekana nazo uma kwenzeka
kungaphezulu rápido: kuya ngokusatshalaliswa okukhethile kungenzeka ukuvuselela ngisho nomshini omdala kakhulu
kuyinto mahhala!: Ngidinga ukusho okuningi?
kungaphezulu ngezifiso: ku-GNU / Linux akunakwenzeka kuphela ukushintsha ingemuva ledeskithophu kepha KONKE okukuyo
kungaphezulu kumnandi: ngokusebenzisa i-GNU / Linux uzofunda ukuthi uhlelo lwakho lusebenza kanjani
Futhi okubaluleke kakhulu: IGNU / Linux iyi software free. Lesi akusona isimemezelo esingenalutho futhi esingenangqondo. Ungahle ungazi ngokugcwele manje, kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi njengoba uqala ukusebenzisa i-GNU / Linux, uzobona ukuthi ingcindezelo kangakanani yobunikazi isoftware, kungaba eyenziwe yiMicrosoft, Apple noma enye.
Uma ungakaze uzame i-GNU / Linux ngiphakamisa ukuthi ufunde eyethu Umhlahlandlela Wabaqalayo. Ngaphandle kokungabaza, ukuhlanganiswa kwama-athikili amahle kakhulu kule bhulogi kulabo abasanda kuqala nge-GNU / Linux.
Yikuphi ukusabalalisa okuncomayo?
I-Linux Mint ukusatshalaliswa okunconyelwe labo abangakaze basebenzise i-GNU / Linux, njengoba kuza nakho konke okufakiwe ukusebenza.
Izidingo zesistimu encane:
RAM: 512MB RAM (Kunconywe i-1GB)
Isixazululo esincane: Amaphikseli angama-800 × 600
Isikhala sediski samahhala: 5GB
Thola iLinux Mint
Kokusabalalisa okubalwe lapha, uLubuntu nguyena onezidingo zehadiwe ezingafuneki kakhulu. Ilungele ukuthola ama-laptops noma ama-netbook nge-WinXP. Futhi, isikhombimsebenzisi sayo esibonakalayo sizojwayeleka kulabo abasuka eWinXP.
RAM: 256MB RAM (Kunconyiwe 512MB)
Isikhala sediski samahhala: 2GB
I-3. I-Zorin OS
IZorin OS inemodi "yeWinXP" eguqula ubuhle bokubuka besistimu iye kweyeWinXP. Ilungele ama-newbies.
Isixazululo esincane: Amaphikseli angama-640 × 480
Thola iZorin OS
I-4. I-OS Elementary
Elementary OS ibonakaliswa ubuhle bayo, ubulula bayo nejubane. Kunconywa kulabo abavela ku-Mac / Apple.
Isixazululo esincane: Amaphikseli angama-1024 × 768
Thola i-Elementary OS
Ubuntu, ngaphakathi kokusabalalisa okwethulwe lapha, mhlawumbe okucishe kufane neWindows XP. Noma kunjalo, futhi kusatshalaliswa okudume kakhulu, ngakho-ke akukwazanga ukuyeka ukuba kulolu hlu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Izinketho ezi-5 zokufuduka usuka kwiWindows XP uye kwiLinux
"Hhayi-ke bangane, uma kunjalo-ke ngiphakamisa ukuthi nifunde lokhu okuthunyelwe lapho kufingqwa khona izinzuzo ze-GNU / Linux, ezingafingqwa kanje:"
Ngendlela, bekungeke kube kuhle uma bengeze (uma kungenjalo phakathi kwama-5 okungenani njengokungeziwe noma "ukukhulunywa okuhle") kuTrisquel kanye / noma eTrisquel Mini?
Kade ngangizisebenzisa isikhathi eside, zombili mina nemishini engiyilungiselela abanye abantu, futhi hhayi nje kuphela ukuthi zivame ukusebenza ngokuphelele 'ngaphandle kwebhokisi', kepha isiphetho asinacala, esimweni yenguqulo yeMini ayisebenzisi zinsizakusebenza nezimpukane lapho uyisebenzisa, futhi ngaphezu kwakho konke: Ziyi-100% Mahhala!
Kungumqondo omuhle! Ngizokungeza ... 🙂
Ngibona inkinga kulokhu okuthunyelwe. Okungenani ngokwazi kwami ​​Ubuntu noma i-Elementary OS ayinakho ukusekelwa kokungena ngemvume nge-LDAP (i-LightDM ayikuvumeli) ngakho-ke ususa ingxenye enkulu yemakethe yezinkampani.
Yize kungenzi ngokwakhona, AKUFANELEKILE
I-Google, phakathi kwabanye abaningi, isebenzisa iseva ye-Ubuntu ne-Ubuntu desktop LTS
URHEL noSUSE EL bathengisa kakhulu ukwedlula Ubuntu
Uma ikhompyutha yakho ingenayo i-hardware evunyelwe i-blob, kuwumqondo omuhle.
Silinde ukukhishwa kokugcina kwe-lubuntu lts ukuyifaka enethini yohlelo lokuxhuma ukulingana (i-Argentina), ngoba angiqiniseki kakhulu ngoHuayra. Qhubeka nebhulogi enhle kakhulu ..
Uzamile iTrisquel Mini?
NjengoLubuntu isebenzisa ideskithophu i-LXDE, futhi kuma-netbook ambalwa engiwafakile yagijima ngokushesha (nangamandla amancane) kuneLubuntu. Futhi, inguqulo yamanje (etholakalayo) yi-LTS, futhi uma uphakamisa i-hardware kahle, une-100% Free distro 🙂
Inkinga ukuthi ikhadi lenethiwekhi le-Wi-Fi elifakiwe lisebenza nomshayeli ophethe.
Yebo, ngiyabonga Alfredo!
Kuyindlela enhle kakhulu. Kulabo abanentshisekelo, sikubeke ngemininingwane lapha: https://blog.desdelinux.net/solidxk-la-mejor-nueva-distro-linux/
Ngisebenzisa uLubuntu kwi-netbook yami (netbook connect equality, ngenze kuphela isikhala phakathi kwalokho obekukhona, akukho okungekho emthethweni) kanye NEZIMPUKANE, ngiyincoma KONKE UMUNTU othutha esuka kwi-PC ebingasebenzi kahle.
Noma ngabe ungumthandi weMidlalo, ngazama uLubuntu kwikhompyutha yami yedeskithophu futhi iMinecraft yabethela ama-30fps, yazinza ngendlela exakile, ayizange yehluke ngokunye (futhi umkhawulo we-FPS wawungenamkhawulo). Ngikhumbula ukuthi kwiWindows yakhuphukela ku-35, yehla yaya ku-15, yalulama in 20, yahlala ku-25 imizuzwana emifushane futhi kwathi nje lapho kuvela isixuku, yakhuphuka intaba, noma yahamba ingxenye entsha yemephu, it zingahluka futhi ngobukhulu obukhulu.
iluphi uhlobo lwe-lubuntu olufake i-12.04?
Kudiski obekufanele ngiyifomathe, ngafaka i-mint 16 mate ne-xface lubuntu 12.04 ne-14.04. kanye ne-mint debian. Ngibasebenzise bonke futhi i-lubuntu 12.04 ibishesha kakhulu, izinzile, isebenzisa ama-91 mgs lapho ibhuthwa nangemva kokufaka konke «i-wine libre-office njll. kusenjalo. I-14.04 idle ama-127 mg. futhi ku-netbook kuzofanele ubeke isithonjana kubha ye-wifi ukuze kube lula. Ngincoma futhi nginamathela ku-lubuntu 12.04. Inakho konke engicabanga ukuthi ayinakho lutho, ingacelwa kuphela isithonjana se-pc yami, ikhompyutha noma izinqamuleli (njengoba itheku laseCairo likubiza kanjalo) kwideskithophu. Angazi ukuthi ikuphi uma ungitshela ukuthi kuzoba kuphi okuphelele ngo-100%. Kusukela vele ngiyabonga kakhulu
Omunye usanda kungibuza ngohlelo lwami lokusebenza, wangibuza ukuthi ngabe kufanele "luqhekeke" ngabe sengimtshela ukuthi lumahhala. * - *
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngifudukile ngisuka ku-XP ngaya kwiLinux Mint 16 Cinnamon futhi bengingeneliseka ngokwengeziwe.
Isixhumi esibonakalayo esihle kakhulu kune-Windows, ideskithophu "elungisekayo", futhi isebenza kahle impela.
Ngempela kungukusatshalaliswa okufanelekile kithina esiqale ngaleli zwe elisha lesoftware yamahhala.
Kungashiwo ukuthi umshini wami uvuselelwe futhi iqiniso ukuthi ngonge imali eningi.
Ngiyethemba ukufunda kabanzi ngalesi sihloko ukuzama okunye ukusatshalaliswa kobuntu.
Ngamafuphi, kunconyelwe kakhulu labo abazimisele ukuchitha isikhathi esithile futhi bafunde.
Izimpikiswano zakho zidlula isitimela semithwalo esilayishwe ngamabhinca wensimbi, kodwa ngeshwa, abakukholwa. Bancamela ukuqhubeka nokugenca ngandlela thile Abafelokazi bosuku, bedelela umthetho wamanje obekwa wumuntu oyedwa. Ngaphezu kwalokho, abaningi bazizwa beziqhenya ngokukwazi ukukwenza, lapho into ewusizo kakhulu ukulanda i-GNU / Linux futhi ufunde kancane kancane ukusetshenziswa nokuphathwa kwanoma ikuphi ukusatshalaliswa okunikeza ikhulu nesithupha kunoma iyiphi iWindows. Futhi akusikho ukuthi i-GNU / Linux uhlelo oluphelele, okungelona, ​​kepha ukuze lube ngcono kunanoma yiluphi uhlelo olukhokhelwayo akudingekile ukuthi lusebenze kakhulu.
Futhi ibintula ezinye ozikhethela njenge-Debian nge-XCFE4 noma i-LXDE, ne-Xubuntu. Noma i-Salix ene-XCFE ne-LXDE, phakathi kwabanye abaningi
Yebo, njenganoma yikuphi ukukhetha, kungenasisekelo. Besingangeza nabanye abaningi futhi. 🙂
Lokhu okuthunyelwe kusebenza njengesiqondiso.
Mina njenge-newbie ngiqale nge-debian, futhi kulula njenganoma iyiphi enye i-distro
Kusukela ekuhlolweni engikwenzile, izidingo ze-Ubuntu ziphakeme kunalokho okukhonjisiwe.
okungenani iprosesa eyi-1.4 ghz ne-1gb yenqama, futhi ngalokhu uhlelo luzohamba kancane kakhulu futhi lusinde
othwala amanzi kusho
Ngicabanga ukuthi kufanele kube nokucatshangelwa okune: a) ukwesekwa, b) umphakathi, c) ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza, kanye d) nesixhumi esibonakalayo - ngale ndlela. Ngibeke izinsizakusebenza ne-interface ngemuva kokusekelwa nomphakathi ngoba kuncike kakhulu kudeskithophu kungakhathalekile ukuthi kusatshalaliswa kanjani. Ekusekeleni nasemphakathini, iMint / * untus distros iwina ngemibhalo kanye nenombolo yezithangami lapho ungathola khona usizo. Kulokhu ngizobeka iMint kuqala ngoba ukusatshalaliswa kuphendula kakhulu kubasebenzisi futhi kwenza kube lula ukufaka izinhlelo. Ngingangeza uMageia ohlwini ngenxa yesasasa lomphakathi nolwazi olutholakala ngeSpanishi (Blogdrake).
Ezinsizakalweni zabambalwa kunokucatshangelwa okwengeziwe: i-PAE. Ama-distros amaningi nangaphezulu (i-Debian kuphela?) Dinga i-PAE futhi ngisenomshini ongayisekeli. Ngokuya nge-interface, uma othile esetshenziselwa iWindows XP, MATE noma, mhlawumbe, i-XFCE bazoba ngamakhandidethi alungile yize esinda kune-LXDE. Ngibe noMATE cishe iminyaka emibili futhi kulula ukuyiqonda nokuphatha. (Angiyincomi iCinnamon ngenxa yokushesha kwehluzo ekudingayo.)
Iqiniso ukuthi yize ngibe neLinux Mint MATE isikhathi eside, ngisebenzise iMageia KDE selokhu kukhishwe inguqulo 3 ngonyaka odlule futhi ngenza kahle. Yize ngidume ngokuba nzima, ngivele ngafaka iMageia KDE 4 kwi-laptop ngaphandle kwe-PAE eneminyaka eyishumi (kodwa, yebo, i-10GB RAM) futhi yenza kahle.
Ngakho-ke kothile otshintshela ku-Linux ngincoma iMageia noma iLinux Mint LTS nge-MATE / XFCE / KDE.
Phendula othwala amanzi
Angisazi ukuthi ngicabange ini ngalezi zimpikiswano.Yiqiniso, iWindows ayisebenzi kahle futhi iMicrosoft iyisilo esizimele esinjalo (futhi, KUMELE sizame) ngokumelene nenkululeko yabantu. Ngokwengxenye yayo, imishini ye-MacOS ne-Apple Ngokuvamile, bangcono kunazo zonke KODWA izindleko zabo, eziphakeme kakhulu, zibenza babe ngabakhulu, okungenye yezindlela zokulala nezilwane.
Futhi iLinux iyamangalisa, iyasebenza, izinzile, ayikhululekile (ngokusho), imahhala… kepha yenzelwa ama-geek, lapho kungatholakali khona futhi kuthakazelelwa ngabasebenzisi abafuna i-OS esebenzayo, isikhathi.
kusukela ngo-2005 ngibonile ukuphawula okunje ...
Uthumela lo mlayezo kusuka ku-Android -LINUX - naku-Chrome
Akufanele kube nzima kangako
Impela sinamadeski esingakhetha kuwo uma kunzima kakhulu
IGnome, KDE, Razorqt, XFCE, LXDE, MATE. I-Cinnamon, i-Enlightment, i-Fluxbox, i-Openbox njll
Njengamanje ngithola ukuthi amanye ama-distros alula kakhulu, ngokwesibonelo iLinux Mint kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Okwenzekayo ukuthi eziningi sezijwayele iWindows
«Izidingo zesistimu encane:
Isikhala sediski samahhala: 5GB »
Angazi ukuthi kungani, ngine-PC ene-Dual core proc (yesizukulwane sokuqala) ku-1.6 ghz, 2 GB ye-RAM ne-8600 GB NVIDIA Gefrorce 1 gt graphic futhi isebenza kabi kabi :(, Ihamba kancane kakhulu, Ngichofoza kudeshi futhi kuthatha imizuzwana emi-5 ukuphendula ...
awuzange uzame ukufaka i-manjaro? Benginenkinga efanayo kodwa nge-manjaro ikhompyutha yami yakudala isebenza kangcono
kufanele ususe i-diver oyifaka nge "driver ezengeziwe" bese uyishintsha nge-proprietary driver.
Ngikubonile ngokuphelele… Nginama-round angaphezulu kwamabili ezinsuku ezingama-365 zokusebenzisa i-linuxmint maya, ebhuthini elikabili ... Manje ngilisusa kanjani i-windows XP ngaphandle kokulahlekelwa yi-linux! Ngicela ungisize !
I-Gparted ikuvumela ukuthi ususe i-XP ngaphandle kokulahlekelwa yi-Linux
Kepha yenza i-USB eneMultisystem noma yumi.exe eneMint neManjaro ezohlala ikukhipha enkingeni noma ngabe ukuphi
Zonke izinketho ezinconyiwe zinye: UBUNTU nezimfoloko
Enkampanini i-SUSE ingaba mnandi kakhulu
Ekhaya noma emahhovisi amancane iManjaro noma i-Antergos
Futhi ukufaka iwayini ukusebenzisa izinhlelo ze-XP ojwayele ukuzichaza ku-athikili enjengale engenzi isiza noma yini
Kuyiqiniso, ukubhekwa okuhle. Kwenzeka ukuthi ngokujwayelekile iDebian / Ubuntu kanye nokuphuma kwayo kuvame ukuba "nobungane" kakhulu kulabo abasanda kuqala.
Lokho akusho ukuthi azingcono, impela…
Empeleni Ubuntu kuphela kanye nokutholakala kwayo, iDebian ayinabo ubungani kubasebenzisi abasha
ngezizathu ezingaziwa, i-elementary yaphahlazeka ekufakeni i-grub futhi ayikaze ikwazi ukuyisebenzisa. Ukugwema ukugcwalisa, ngenze izindlela ezimbalwa zokulungisa i-bootloader ngagcina ngo-Ubuntu 13 manje iMageia yama-B amathathu: Kuhle, kuhle futhi kushibhile
Ukuphahlazeka kuyisihlobo ... ngine-Ubuntu 12.04, futhi ngemuva kokuvuselelwa engikwenzayo, ukusebenza kwekhompyutha kubi, kubanda kakhulu njalo kufanele ngikudedele "kutholakale" ukuze kuqhubeke nokusebenza (ngihlala ngithola iphutha ngento ebizwa nge- «ntop», okuthi kuze kube manje angikwazi ukwazi ukuthi iyini nokuthi yenzelwe ini), ... ulwazi lwami ngalokhu kusatshalaliswa kweLinux lwakhathaza kakhulu ngakho: S
Kubonakala kimi ukuthi ukufuduka kusuka ku-Windows XP kuya ku-Linux kungaba yinto yemvelo kakhulu, ngoba izidingo zobuchwepheshe zokusebenzisa iWindows 7 noma i-8 ziningi, ngakho-ke imishini emidala ayikwazanga ukusebenzisa lezi zinhlelo ezintsha zokusebenza.
Uhlu oluhle kakhulu olunikezayo, yize ngincike kakhulu kuLinux Mint.
Futhi bengicabanga ukuthi kufanele ube ne-PC epholile ukuze usebenzise izinhlobo zakamuva ze-Ubuntu.Ngicabanga ukuthi kuze kube ngu-10.04 le nto isihambile, kuzodingeka i-4GB yenqama uma ufuna ukusebenzisa i-Ubuntu 🙁
BONKE BABUNTU 😀
I-athikili enhle kakhulu, yenkampani engizobheja ku-Ubuntu, inokusekelwa okuhle nokusekelwa okuhle.
Kunjalo. Siyabonga ngokushiya umbono wakho.
gonzalezm # Bik'it Bolom # kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Ngiyethemba awunankinga noPablo ngihumushe futhi ngashicilela lokhu okuthunyelwe ngolimi lwendabuko lwesiTsotsil. Ngishiya isixhumanisi http://slikeb.mx/?p=92. Sanibonani
Phendula ku-gonzalezm # Bik'it Bolom #
Ngine-xp, futhi ngizwe ukuthi abantu abaningi bazothuthela ku-linux, iqiniso ukuthi angazi ukuthi ngenzeni ukusuka ku-xp kuya ku-linux, ingalandwa nge-xp? Noma kufanele yenziwe kwi-floppy disk? Ungangitshela ukuthi ngenzeni? Futhi ngibona kuphi isikhala samahhala esine-pc yami?
Ngikisela ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu wokuqala: https://blog.desdelinux.net/guia-para-principiantes-en-linux/
Hector Foster kusho
Ngihlela ukufuduka ngisuka kuma-windows xp ngiye ku-Linux Mint, kungenzeka yini ukusebenzisa imibhalo ebengiyigcine ku-Microsoft Office?. Ngazi iLinux kuphela ngemuva, ngoba ngingumsebenzisi we-PC othuthukile kepha, wobudala besithathu.
Phendula uHector Foster
Sawubona Hector! Vele kungaba njalo. Kunehhovisi lehhovisi elibizwa ngeLibreOffice, okungaba indawo yeMicrosoft Office, esekela wonke amafomethi we-.DOC, .DOCX, .XLS, njll. ILibreOffice iyatholakala nakwiWindows, ngakho-ke ungayizama kuqala uma ufuna ukubona ukuthi ihambisana kanjani namafayela wakho athile. Ngokuvamile, kuvamise ukuba phezulu kakhulu (ngaphandle kokuthi axakeke kakhulu emashidini nokunye, yize lokhu kungavamile ukwenzeka).
Uma usanda kuqala ku-Linux, ngincoma kakhulu ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu wokuqala kanye nama-athikili ahlobene nawo:
ungasebenzisa futhi i-kingsof office..ebukeka ifana ncamashi ..
Juan José kusho
Ngilahlekelwa ngamafayela wami uma ngiguqula ukusuka ku-XP kuye kokunye kwalokhu okukhethwa kukho?
Vele hhayi uJuan, ngaphandle kokuthi ubabuyisele ku-USB noma i-DVD, konke kuyafana noma kungcono. Mayelana
Ku-NETBOOK, noma ngabe unezidingo ezishiwo ze-Ubuntu, ayivele iqale lapho kudlula i-USB, ilenga ngakho-ke ayincomi kangako, ithanga lami liyinkumbulo eyi-2 neprosesa eyi-1.2 futhi ayisebenzi.
Ungafaka noFedora futhi ngibuyele kuyo ngemuva kwesikhathi eside, iyona engiqale ngayo futhi ibonakala inhle kakhulu futhi ilula, kumane nje kuyindaba yokulandela umhlahlandlela wokufakwa ngemuva kokufaka izinto ezithile esizidingayo usuku nosuku.
Njengamanje ngiyifakile futhi iyona engcono kunazo zonke, ezinzile kakhulu, elula futhi esebenzayo. Ngincoma i-Mate + compiz spin version.
Leli yikhasi elisemthethweni: http://fedoraproject.org/
futhi lo ngumhlahlandlela omuhle kakhulu wokufaka ngemuva: http://kuboosoft.blogspot.com.ar/2013/11/que-hacer-despues-de-instalar-fedora-20.html
Hhayi-ke, kubo bonke obabizile, okungcono kakhulu kubonakala kimi iLinux Mint nayo ilungele kakhulu abasebenzisi abasha noma yiluphi uhlobo lomsebenzisi. Faka i-Linux Mint bese ukhohlwa ngezinkinga ze-Ubuntu, okuwukuphela kokubi ukuthi ine-software yakudala (efana no-Ubuntu) futhi iphuma ngemuva kwenyanga emva Ubuntu.
Noma kunjalo, mhlawumbe unyaka kusuka manje lokhu kuzoshintsha, njengoba behlela ukwenza okuphelele ku-Ubuntu, mhlawumbe bazokwenza ukuthi babuyele emuva ukukhishwa futhi ngethemba lokuthi kuphuma negazi.
Ngino-1 unyaka ngine-linux mint futhi bengingeke ngiwushiye ngeze, ngiqale nge-ubuntu 10.10 kepha lapho ngifudukela ku-linux mint konke kushintshile, ngiyohlala ngincoma i-linux mint, mathupha ukusatshalaliswa okuhle engikusebenzisile….
Ngiyayithanda lapho bebeka iLinux Mint kuqala
Sawubona, ngine-Windows XP efakiwe, nge-Linux ngikwazi ukufaka noma yiluphi uhlelo lwe-Windows ne-Office yakho. Ngiyabonga